Ịgba egwu na ịzụlit azụmahịa gị abụghị site n’ọchịchịrị. Ọ na-achọta ọtụtụ ihe ọmụma banyere ahịa gị, nghọta dị mma nke ndị na-ege gị ntị, na ịmatakwu nke azụmahịa gị tupu ị nwee ike ịsọ ọsọ-gbasoo ụzọ n ke Ọ bụghị n’ụzọ kachasị mfe ka ọ ga-aga nke ọma, mana ịbawanye uru bụ na ọ bụ ihe kacha akwụ ụgwọ.
0.1 Bag ọ bụla ibu hacker bụ ngwá ọrụ
1 Înye nwere ihe kasị mma na-eto eto Hacking Ngwaọrụ?
Bag ọ bụla ibu hacker bụ ngwá ọrụ
Maka ndị na-azụ ahịa na-achọ ụzọ ha ga-esi mezuo mmụba ha na-eme atụmatụ ha, ha kwesịrị ịma maka ngwá ọrụ ndị na-eme ka usoro en anden ike. Ịzụlite ma mejuputa usoro ị ga-esi kwụsị mbanye gị bụ otu ihe; iji ngwanro ma ọ bụ ngwá ọrụ iji rụọ ọrụ ụfọdụ n’ime usoro ndị ahụ na usoro gị bụ ihe ọzọ.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịme ihe ndị ahụ n’onwe gị, ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnye ha ka ha nwee ike ịmepụta ngwá ọrụ hacking. Ebumnuche nke ngwaọrụ ndị a bụ ime ka ọrụ gị dị mfe karị ka i wee nwee ike ilekwasị anya n’ịme ihe ndị dị mkpa maka azụmahịa gị.
Yabụ, ọ bụrụ na inwetara ọgbụgba egwu ha etolit etolit ma ọ bụ opekata mụta otu esi aga n’ihu n’inwe uto azụmahịa gị, ihe ị ga – achọ ugbu a bụ ngwá ọrụ ga – emegu ihewur.
N’okpuru ebe a, ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa na-esonyere gị uto ha na-emepụta ngwá ọrụ ndị dị na ha bụ ndị bare ka azụmahịa ha baawanye na-aga ngwa ngwa.
Tupu ị na-agagharị na post ahụ, azịza ị ga-ahụ ga-ekpuchi ngwaọrụ na ngwa dịgasị iche iche nke nyere ha aka ịbawanye ngwa ahịa ha ngwa ngwa. Ya bare, na-atụ anya azịza dịgasị iche ich nke na-enye echiche ndị na-adọrọ mmasị banyere otu onye ọ bụla n’ime ndị na-aza ajụjụ si eto ha.
Înye nwere ihe kasị mma na-eto eto Hacking Ngwaọrụ?
Pịa ebe a iji keta ihe Devid zara!
Pịa ebe a iji kesaa i Brian zara!
Otu n’ime ụzọ m si azụlit ahịa m bụ site na mmekọrịta mmekọrịta – m na-ekwusi ike mgbe nile na m na-enye uru mgbe ọ bụla metụtara mmekọrịta ma ọ bụ mmekọrịta mmekọrịta na ihu na i i Netwọk gị na aha gị bụ igodo gị maka ịga nke ọma.
M na-eji ma abụọ LinkedIn na Facebook iji zụlit mmekọrịta siri ike iji hụ na ndị mmadụ mara m, mgbe ahụ nwee mmasị na ihe m na-eme na n’ikpeazụ iji tụkwasị obi na m ga-enyefe nkwa m iji nye ha nnukw Oru.
Amalitere m otu ìgwè på Facebook kan have nye ndị na-achọ ọrụ na ndị na-agbanwe ọrụ na ndị na-atụle ịbanye n’ahịa. N’ime ọnwa ole na ole, obodo ahụ etinyewo aka ma kwuo nchegbu ha, olileanya ha, atụmatụ ha na ihe mgbaru ọsọ ha.
Nke a, n’aka nke ya, na-eduga na nyocha na ebe nrụọrụ weebụ m, ịchọ ịmata ihe niile m na-arụ ma na-akpọ maka mkparịta ụka na ntinye nyocha na gbakwunyere ahịa nke ngwaahịa na ulo nan.
Ọkachamara azụmahịa m kacha amasị m bụ Google. Google bu n ‘ugbua site na NXXXXX kachasi ewu ewu na Intanet ma jiri ya iji kpoo uzo bu ihe na-adighi nma. Ma, e nwere ọtụtụ ihe ị ga-esi nweta ya. Otu ihe atọ bụ iji Google maka nyocha ahịa.
iji Ngwá Ọrụ Søgeord Google ị nwere ike ịchọpụta ihe ndị mmadụ na-achọ na ole achọrọ ka e nwee ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Websted, der ikke er nøjagtigt med data, som vi gerne vil se efter SEO, ahia gi nwere ike imata onodu ahia a.
Ọkachamara kachasị amasị m na-arụ ọrụ ngwá ọrụ n’oge ahụ bụ MissingLettr. Site na mmekọrịta ọha na eze, aha egwuregwu ahụ ga-anọrịrị na nri. Nke ahụ adịtụbeghị mfe, na nnweta mgbasa ozi na-abụ ihe kachasị mkpa maka otu mmekọrịta mmadụ na ibe ya si egosipụta ọdịnaya gị, ọ na-emewanye ike.
Ihe m hụrụ n’anya gbasara ManglerLettr bụ na m nwere ike itinye ederede m ebe ahụ ọ na – ewetara m akwụkwọ ozi zuru oke maka afọ. Ọdịnaya na-agbadata dị ka nke ahụ na-enye m ohere ka mma nke ịhụta ọdịnaya m na mkpọtụ nke ndị na-eme ka ọ dịrị, ọ bụrụgodị na ha anọghị n’ịntanetị n’oge nkeji nke-ne ‘elu.
Ọkachamara kachasị amasị m na-emepụta ngwá ọrụ ga-abụ na en na-enwe-hashtag #journorequests på Twitter ma ọ bụ, ọbụna ka mma, ịbanye na JournoRequest onye na egbochita hashtag ubochi maka otuchi na na -e. Ejirila m ụzọ dị iche iche na ntanetị na ntanetị dị na ntanetị n’ụdị mbipụta profaịlụ dị elu dị ka The Telegraph, The Times, Evening Standard na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ka ọ na-aghọwanye ewu ewu, ọ chọrọ ịbụ nke mbụ ịza nsị nke ndị nta akụkọ na ndị na-ede blọgụ biputere na-achọ ndị ọnụ na-ekwuru maka akụkọ ha mana dịka m na najara -abịakwute m. Twitter, n’ozuzu, bụ otu n’ime ụzọ kachasị mma iji ruo ndị mgbasa ozi na maka onye ọ bụla na-eche etu esi erute otu mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri mbụ m na-akpọ.
Dankorita nwoke na nwanyi na ndi ogwu di n’etiti MajWismann.com / Facebook – Twitter – Instagram
Ihe kachasị mma m ga-eji arụ ọrụ m bụ ngwá ọrụ a na-akpọ TinyRanker. Ọ bụ ngwá ọrụ na-enyere gị alias ịchọta ebe ị nwere na otu isiokwu na onye nọ na mbụ 10 placeringer. Maka m, ọ dị oke mkpa na ndị mmadụ nwere ike ịchọta m n’Ịntanet.
Dị ka onye na-ahụ maka mmekọahụ, ndị mmadụ na-achọ nsogbu nsogbu ha nwere – ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ịchọta m, enweghị m ọrụ. N’ihi ya, m na-eji ngwá ọrụ na-agbaso ọnọdụ m na mgbe m na-emepụta ihe ntanetị ọhụrụ. Enwere m ike ịlele ndị dị na ibe otu na Google iji hụ ihe m nwere ike ime karịa ha na ụzọ ahụ na-aga n’ihu. M nwere ike ịgbaso otú ọkwa m si dị mma ka oge na-aga.
Echere m na ngwá ọrụ bụ ihe ntanye na ndị mmadụ na-adabere na ha nke ukwuu. Ihe nzuzo dị na nzuzo na-eto eto bụ ịbanye na onye ahịa gị ma gwa ha ka ha kpọta ndị enyi ha na ndị enyi ha.
Facebook Mgbasa ozi na ngwaọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ mana ike nke ntinye alias side n’aka onye ndụmọdụ na-atụkwasị obi ga-agbanwe dị elu karịa mgbasa ozi ma ọ bụ ngwá ọrụ. Dabere na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ị nwere ike ịhụ uto hockey stick site na ị na-ezigara ndị ahịa gị ozi ma na-ajụ ha ma ọ bụrụ na ha nwere obi ụtọ na ha ga-agwa mma ya Inyekwuo ndi mmadu (ego ma o bu ogo gi dika ugbo ikuku na-eme ka i buru ugbua na ugbua) nwere ike mee ka ihe a nile mee ngwa ngwa.
Otu n’ime ngwá ọrụ kachasị amasị m maka ịbawanye aka bụ site na ịmepụta vidiyo. Vidiyo na-aga n’ihu na-eto eto ma na-egosiwanye nke ọma na akụkọ gị na ntanetị. Enwere m mmasị iji pro version nke Ripl ngwa mkpanaka iji kụziere ma ọ bụ nye usoro nhazi.
Ripl na-enye gị ohere ịmepụta vidiyo dị mkpirikpi ma ọ bụ na-enweghị ụda ma ọ bụ na-enweghị ụda olu nke eze ma ọ bụ olu nke gị, na-enye aro maka atọ dị iche iche maka posts na ụ i ahụ, na-enye gị ohere ịlele ọnụọgụ nke vidiyo gị. ụdị dị iche iche (Facebook, Instagram, på Twitter). Mgbe a na-eji ya eme ihe na-agbanwe agbanwe, Ripl ejirila okpukpu okpukpu abụọ gbakọọ aka.
nchoputa Business Marketing Engine / Twitter – LinkedIn
Ọzọ kachasị mma ị ga-esi jupụta gị n’ụlọnga på webstedet via e-mail ntanetị. Nke a bụ alias ụzọ dị mfe na nke dị irè iji na-enweta ozi ọhụụ mgbe niile. Ka o wee nwee ihe ịga nke ọma, ọ dị mkpa ka ijide n’aka na ozi ọ bụla bụ ahaziri onwe ya ma nye onye natara ya ozugbo.
Enhver ebe a na Business Marketing Engine enyere ndị ahịa anyị aka ịmepụta ozi ịntanetị dị irè na ngwaahịa anyị Copywriter Taa.
Zipụ na ndepụta nke 50 ndị mmadụ na niche gị
N’iji ụzọ a ị nwere ike iru 250 maka atụmanya echekwara otu izu ma ọ bụrụ na onyinye gị na oyiri ya ziri ezi, ị nwere ike ịtụ anya inwe nhazi 5-10 kwa izu site na nke a.
E-mail koldt efter kachasị mma maka azụmahịa ọ b nala na-achọ ka eto eto.
Uto bụnne nke ihe niile mepụtara. Ọ bụghị otú a ka okwu ochie si